Amaphutha Wokuthuthukiswa Kwetimu Ejwayelekile ngeWordPress | Martech Zone
Isidingo sokuthuthukiswa kwe-WordPress siyaqhubeka sikhula futhi cishe wonke amaklayenti ethu manje anendawo yeWordPress noma ibhulogi le-WordPress elishumekiwe. Ukuhamba okuqinile - okungathandwa yiwo wonke umuntu kepha kunezindikimba eziningi kakhulu, ama-plugins, nenani elikhulu labathuthukisi elinengqondo. Amandla okuguqula ubukhona bakho bewebhu ngaphandle kokukhuhla ipulatifomu bese uqala kabusha kuyinzuzo enkulu.
Uma uke waba nesayithi le-WordPress olizondayo, noma umane nje ungalitholi lisebenze ngendlela othanda ngayo - vele uthole insiza engakulungisela yona. Ukuqaliswa kwe-WordPress kuhle kuphela njengabantu abenze itimu yakho nama-plugins.
Sibe nesidingo esikhulu kangangoba kudingeke ukuthi siphendukele kumasevisi nakosonkontileka abancane abaguqula amafayela we-photoshop abe ngamatimu, noma sithenga izingqikithi kumasevisi wezinkampani zangaphandle. Siyithanda ngempela i-Themeforest ngekhwalithi nokukhethwa kwayo (leso sixhumanisi sethu sokusebenzisana). Okusemqoka, akufanele neze uhlele amafayela wetimu ngaphandle kokuthi wenza okuthile okunamandla engqikithini. Konke okuqukethwe - amakhasi, okuthunyelwe, nezigaba, kufanele kuhleleke ngokuphathwa kwetimu yakho.
Uma sinengqikimba ithuthukisiwe noma siyithenga, noma kunjalo, sivame ukuthola lezi zinkinga ezivamile:
Izigaba esikhundleni Sezinhlobo Zokwezifiso Zokuthumela - Kwesinye isikhathi amasayithi anezingxenye ezahlukahlukene - njengeNews, Press Releases, Product Lists, njll ezisebenza kahle ngefomethi yesitayela sebhulogi lapho unekhasi lezinkomba, amakhasi wesigaba bese kuba amakhasi owodwa ukukhombisa okuqukethwe okugcwele. Kodwa-ke, siyaqaphela ukuthi abathuthukisi abaningi bezindikimba banqamulela izigaba zokuthuthukisa nezama-hardcode ukuze ukwazi ukusebenzisa ibhulogi kuphela ukuthumela lokhu okuqukethwe. Lokhu ukuqaliswa okubi futhi akusizakali ngezinhlobo ze-WordPress's Post Post. Futhi, uma uhlela kabusha izigaba zakho - uhluziwe ngoba ingqikithi ivame ukubhalwa ngekhodi. Sivame ukungena, sithuthukise izinhlobo zeposi langokwezifiso, bese sisebenzisa i-plugin ukuguqula isigaba sokuthunyelwe kube uhlobo lokuthunyelwe ngokwezifiso.
Izinkambu Zenkambiso ngaphandle kwe-plugin ye-Advanced Field Fields - Kuyangimangaza impela ukuthi Izinkambu Zenkambiso Ethuthukile azithengwanga yiWordPress futhi zahlanganiswa nomkhiqizo oyinhloko. Uma unamaposi adinga imininingwane eyengeziwe - njengevidiyo, ikheli, imephu, iframe, noma eminye imininingwane, i-ACF ikuvumela ukuthi uhlele ukungena kwalezo zinto ngokunamandla kungqikithi yakho futhi uzenze zidingeke, zenziwe iphutha, noma zikhethwe . I-ACF kufanele ube nayo futhi kufanele isetshenziswe esikhundleni se-Custom Fields ngenxa yolawulo olunikeza phezu kwetimu yakho. Ufuna ividiyo efakwe ekhasini lasekhaya? Faka inkambu yangokwezifiso ekhombisa kuphela ebhokisini le-meta kusihleli sakho sekhasi lasekhaya.
Ukwakheka Kwetimu - I-WordPress inesihleli sendikimba esiyisisekelo kakhulu okufanele sisisebenzise ngezikhathi lapho amaklayenti angasiniki ukufinyelela kwe-FTP / SFTP ukuhlela amafayela. Akukho lutho olukhungathekisa njengokuthenga ingqikithi futhi ungenayo indlela yokuhlela izitayela, unhlokweni, noma unyaweni ngoba ahambise amafayela kumafolda angaphansi. Shiya amafayela empandeni yefolda yetimu! Ngaphandle kokuthi ufake olunye uhlaka, asikho nje isidingo sazo zonke izakhiwo eziyinkimbinkimbi zefolda. Akufani nokuthi uzoba namakhulu wamafayela kufolda yetimu ongayitholi.
Ama-Sidebars namawijethi - Ukungabi nezinsimbi eziseceleni ukufaka amawijethi kuyo yonke itimu yakho kuyakhathaza… bese ukusebenzisa ngokweqile imigoqo eseceleni namawijethi walokho okufanele kube yizinketho ezilula nakho kuyakhathaza. Ibha eseceleni kufanele ikhawulelwe kokuqukethwe okumile kuzo zonke izinhlobo zamakhasi ezingqikithi zakho kepha ivuselelwa ngezikhathi ezithile. Kungaba ukubizelwa esenzweni ngasohlangothini lokuqukethwe kwakho. Noma kungaba yisikhangiso ofisa ukusikhombisa ngemuva kokuqukethwe. Kepha akulona ibha eseceleni newijethi ukubonisa nje inombolo yocingo, ngokwesibonelo.
Izinketho ezinamakhodi aqinile - Izixhumanisi zomphakathi, izithombe, amavidiyo, nazo zonke ezinye izinto kufanele zakhelwe kuzinketho zetimu ezingashintshwa kalula. Akukho lutho olushubisa njengokungena kumafayili engqikithi yengqikithi ukufaka isixhumanisi sephrofayela yomphakathi ezindaweni ezi-10 ezahlukahlukene. Faka ikhasi lezinketho (i-ACF ine-add-on) bese ubeka zonke izilungiselelo lapho ukuze abantu bakho bokumaketha babangeze kalula noma babashintshe lapho benza ingqikithi iqhubeke.
Uhlu Lwesixhumanisi Amamenyu - I-WordPress ibikade inengxenye yezixhumanisi futhi ekugcineni bayisusa ngoba amamenyu ebeyindlela ephelele yokusebenzisa uhlu lwezixhumanisi ezinsizakalweni zangaphakathi noma zangaphandle. Sivame ukubona imenyu eyodwa ehlelwe ezindaweni eziningi kusayithi, noma sibona uhlu olukhonjiswe kuwijethi eseceleni. Uma uhlu luyindawo ehlala unomphela futhi luvundlile, lubheke phezulu, noma ngokulandelana… yisikhathi semenyu.
Inkomba kuqhathaniswa ne-Front Page - Ikhasi lenkomba kufanele ligcinelwe ibhulogi yakho futhi libhale uhlu lwezinto ozikhiqizayo. Uma ufisa ukuba nekhasi lasekhaya langokwezifiso okungelona okuthunyelwe kwebhulogi, kufanele ufake ifayela le- Ifayela lesifanekiso sekhasi langaphambili esihlokweni sakho. Izilungiselelo Zokuphatha> Ukufunda ngaphakathi kweWordPress zikuvumela ukuthi usethe ukuthi yiliphi ikhasi ofisa ukuba nalo njengekhasi lakho langaphambili nokuthi yiliphi ikhasi ofisa ukuba nalo njengekhasi lakho le-blog… ulisebenzise!
Isabele - Yonke indikimba kufanele ibe iphendula ukuphakama nobubanzi obuhlukahlukene benqwaba yezindawo zokubuka abantu basebenzisa kuwo wonke amadivayisi eselula, amathebulethi, ama-laptops, nezibonisi ezinkulu. Uma ingqikithi yakho ingaphenduli, uzilimaza wena ngokunganikezeli umuzwa ofanele kudivayisi esetshenzisiwe. Futhi kungenzeka ukuthi uyazilimaza ngokungatholi ithrafikhi yokusesha yeselula kusayithi lakho.
Omunye umkhuba omuhle esiqala ukuwubona ngonjiniyela betimu nabathengisi bezingqikithi kufaka phakathi ifayela lokungenisa le-WordPress ukuze uthole isayithi lisebenze njengoba libonakala ngenkathi ulithenga - bese ungena nje bese uhlela okuqukethwe . Ukuthenga nokufaka ingqikithi - bese ubheka kuqala ikhasi elingenalutho ngaphandle kwezinto nezinto ezinhle okukhonjiswa ukwakheka kwengqikithi kuyanda. Ijika lokufunda lihlukile kuzindikimba eziyinkimbinkimbi futhi onjiniyela bavame ukusebenzisa izici ngokuhlukile. Imibhalo emikhulu nokuqukethwe kokuqala kuyindlela enhle yokusiza amakhasimende akho aphume.
Tags: imikhuba engcono kakhuluizigabaamasimu wangokwezikoIzinhlobo zokwenza ngokwezifisoukuthuthukiswa kwengqikithiamaphutha wetimuisihloko se-wordpress
UJun 29, 2014 ngo-10: 55 AM
Okunye okuthunyelwe okuhle uDoug! Siyabonga ngokwabelana, ngifunde kahle! ..